T5557 ဟိုတယ်တံခါး Card ကို, T5567 ဟိုတယ် Card ကို, T5577 ဟိုတယ်အခန်း Card ကို, T5577 Hotel Encryption Card, T5557 Encryption Hotel Room Card
T5557 ဟိုတယ်တံခါး Card ကို, T5567 ဟိုတယ် Card ကို, T5577 ဟိုတယ်အခန်း Card ကို
EM ကဒ် / LF Card ကို T5557 Encryption Hotel Room Card, T5557 ဟိုတယ်တံခါး Card ကို, T5567 ဟိုတယ် Card ကို, T5577 Hotel Encryption Card, T5577 ဟိုတယ်အခန်း Card ကို
chip အမျိုးအစား: Atmel T5567 / T5577
operating အကြိမ်ရေ: 125kHz
Reading အကွာအဝေး: 3~ 10cm
Read / အချိန်ရေးရန်: 67ဒေါ်
Operating အပူချိန်: -20℃ ~ + 55 ℃
အချက်အလက်ကာကွယ်မှု: > 10 နှစ်ပေါင်း
အရွယ်: 8654 × 0.84mm သို့မဟုတ်ဖောက်သည်သတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းအတာ×, Non-စံပုံစံမျိုးစုံသို့လည်းလုပ်နိုင်ပါသည်, သို့မဟုတ် key ကိုကွင်းဆက်.
ပစ္စည်း: PVC / PET / PETG / ကို ABS, 0.13မီလီမီတာကြေးနီဝါယာကြိုး
ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်: PVC လမိုင်း
Hotel access cards was called hotel room cards, generally use chip cards, by induction system card to open the door. Hotel key card chip General: contactless type: T5567 chip hotel room card, EM4469 chip hotel room cards; ထိတှေ့: SLE4442 chip hotel room cards. also useful magnetic stripe cards. According to lock readers decide what kind of chips.
T5567/T5577 chip other applications: အချိန်နှင့်တက်ရောက်သူစနစ်များ, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်, ဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်, ကားရပ်ခြံ, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, တိရိစ္ဆာန်ဖော်ထုတ်ခြင်း, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, စက်မှုဇုန်အလိုအလျောက်, တက်ရောက်သူတွေ့ဆုံ, အီလက်ထရောနစ် tags များ, စူပါမားကက်, ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှု, ပုဂ္ဂိုလ်များစီမံခန့်ခွဲမှု, လုံခြုံရေးစနစ်များ, စသည်တို့ကို.
SeabreezeRFID, LTD. T5577 chip ကိုကဒ် Initiative နှင့်ဒေတာများစာဝှက်စနစ်န်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်.
I am interested in your product T5557 Hotel Door Card, T5567 ဟိုတယ် Card ကို, T5577 ဟိုတယ်အခန်း Card ကို
prev: T5557, T5567, T5577 Chip ထူထပ်သောကတ်, T5577 Shell ကကဒ်
နောက်တစ်ခု: Atmel T5557 Chip ဆီ Card ကို, T5577 Chip ဂတ်စ်ကတ်